Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 8)
Samsung Galaxy S20 waxaa laga heli doonaa adduunka oo dhan bisha Maarso 13: sidoo kale ogow qiimaheeda
Febraayo 11, Samsung Galaxy S20 cusub ayaa la soo bandhigayaa waxaanan horey u ogaanay qiimaha, iyo sidoo kale taariikhda aad gacanta ku heyso.
Galaxy Z Flip ma lahan kamarad weyn oo 108 mpx ah
Dareemaha ugu muhiimsan ee Samsung ee soo socda ee si buuxda u itaal roon ma gaari doono 108 mpx sida lagu xamanayo.
Samsung waxay magacowday madaxweyne cusub qeybta mobilada
Samsung waxay qorsheysay istiraatiijiyad cusub oo leh isbeddelka madaxweynaha qeybta mobilada. Wuxuu sameeyaa ka dib markii uu ku sugnaa Dj Koh hortiisa.
Nubia Red Magic 5G waxay yeelan doontaa xeedho 55W
Red Magic 5G cusub ee ka socda Nubia wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda ee leh shaashadda ugu sarreysa shaashadda suuqa.
Cusboonaysiinta Android 10 waxay ku fidaysaa LG G8 ThinQ
Taleefanka casriga ah ee LG G8 ThinQ ayaa hadda helaya casriyeynta Android 10 ee Mareykanka iyadoo tan oo horumarin ah.
Huawei Mate 30 Pro wuxuu helayaa cusbooneysi cusub EMUI 10
Huawei Mate 30 Pro wuxuu soo dhaweynayaa nooc cusub oo ka wanaagsan EMUI 10. Tan waxaa ku dhawaaqay Huawei lafteeda.
Suuqa casriga ah ee la isticmaalay wuxuu ka badnaa 206 milyan oo cutub sanadka 2019 wuuna sii kori doonaa
Shirkadda Caalamiga ah ee Xogta ayaa soo saartay warbixin cusub oo ay kaga hadlayso baaxadda suuqa taleefannada casriga ah sanadkii la soo dhaafay.
Maya, Xiaomi Mi 10 ma bilaabi doono 65 W lacag degdeg ah, laakiin Mi 10 Pro ayaa bilaabi doona
Sida lagu sheegay warbixin cusub, Xiaomi Mi 10 wuxuu la imaan doonaa teknoolojiyad si dhakhso ah u socota oo 48-watt ah, halka Mi 10 Pro oo leh 65-watt ah.
Maxay iibinta waaxda kiniinadu u sii dhacaysa?
Iibinta qaybta kiniiniga ayaa hoos u sii socota. Ma ahan wax cusub. Waxay ahayd ku dhowaad saddex sano ...
Xiaomi Mi 10 waxay lahaan doontaa kamarad 108 MP ah
Xiaomi Mi 10 wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah taleefannada ugu horreeya suuqa si loo soo saaro processor-kii ugu dambeeyay ee Qualcomm oo uu weheliyo dareemayaal muuqaal oo awood badan leh.
Samsung Galaxy A71 5G ayaa sidoo kale suuqyada Mareykanka mari doonta
Samsung Galaxy A71 5G cusub shaki la’aan waa mid ka mid ah aaladaha moobiilka ee shirkadda ee sanadkaan 2020.
Black Shark Wada-hawlgalayaasha leh Ciyaaraha Tencent ee Cusbooneysiinta Ciyaaraha Mustaqbalka
Shirkadda 'Black Shark' ee Xiaomi ayaa ku dhawaaqday inay la shaqeysay Tencent Games si ay ugu fidiso adeegyadeeda horumarin dhanka ciyaarta ah.
Android 10 ayaa imaan doonta waqti hore intii la filayay Samsung Galaxy A60 iyo M40
Samsung Galaxy A60 iyo M40 waxay ka soo muuqdeen keydka macluumaadka ee wakaaladda shahaadada Wi-Fi Alliance oo leh Android 10.
3 barnaamij oo sixir saafi ah u ah S Pen-ka Galaxy Note 10 +
Isticmaalka S Pen wuxuu macnaheedu noqon karaa waxqabad wanaagsan oo leh Galaxy Note 10 iyo in ka badan haddii aad ku sameyso 3-da barnaamij ee aadka u gaarka ah ee bilaashka ah.
Tilmaamaha LG W20 ayaa ku qoran xogta Google Play Console
Xogta Google Play Console waxay liis garaysay qaar ka mid ah astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee LG W20.
Realme XT wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
Realme XT, taleefankii ugu horreeyay ee suuqa ku shaqeeya oo leh kamarad 64 MP ah, ayaa durba helaysa casriyeynta Android 10.
Oppo Find X2 wuxuu yeelan doonaa shaashad dhan 120Hz QHD +
Oppo Find X2 wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah aaladaha soosocda oo leh muuqaalka 120Hz QHD +. Imaanshihiisu wuxuu tilmaamayaa rubuca koowaad ee sanadkan.
Huawei P30 Lite wuxuu bilaabaa helitaanka cusboonaysiinta EMUI 10
Huawei wuxuu bilaabay cusbooneysiinta xasilloonida EMUI 10 waxayna si tartiib tartiib ah u gaari doontaa dhammaan qalabka soo saaraha P30 Lite.
Kani waa casriga cusub ee Sharafta leh oo leh kamarad gadaal oo afargeesle ah oo la caddeeyay
Telefoon casri ah oo casri ah ayaa dhawaan suuqa soo gali doona. Midkani wuxuu la yimaadaa astaamo dhexdhexaad ah, markaa qiimaheedu waa inuu ahaadaa mid la awoodi karo.
Huawei P40 Pro Premium, kan ugu khaaska ah ee kala duwan
Waxay u muuqataa in Huawei ay diyaarisay wax lala yaabo soo bandhigiddeeda P40 Pro Premium, oo noqon doonta nooca ugu khaaska ah ee kala duwan
Samsung waxay bilaabaysaa iibinta Galaxy A51 ee Yurub
Samsung Galaxy A51 wuxuu bilaabmayaa in lagu iibiyo Yurub suuqyada kala duwan, sidaas oo kale dukaamada.
Tani waa boodhadhka sirta ah ee Xiaomi Mi 10 oo ku dhawaaqaya taariikhda la sii deynayo
Ugu dambeyntii waxaan horeyba u ogaanay taariikhda suurtagalka ah ee bilaabista ee Xiaomi Mi 10, casriga casriga xiga ee guuleysta ...
Oppo F15, casriga casriga ah ee waxqabadka dhexdhexaadka ah ee la yimid Helio P70
Oppo F15 waa taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah kaas oo la imanaya Mediatek Helio P70 chipset iyo qiime macquul ah.
Android 10 horeyba waxay u timid Realme 3 Pro iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub
Xadka dhexe ee Realme 3 Pro wuxuu durbaba helayaa cusbooneysiin cusub. Waxay kudareysaa Android 10 iyo tan astaamo cusub, hagaajin, iyo horumarin ah.
Samsung Galaxy A31 iyo Galaxy A41: kuwani waa kamaradaha iyo baytariyada ay soo bandhigi doonaan
Kaamirooyinka suurtagalka ah iyo baytariyada qalabayn doona Samsung Galaxy A31 iyo Galaxy A41 ayaa lagu soo bandhigay warbixin cusub.
Kaamirada hore ee Galaxy S20 Ultra waxay noqon doontaa 40 mpx
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta Galaxy S20 Ultra waxay soo jeedineysaa inay yeelan doonto 40 mpx aaladda hore ee sawir-qaadista.
Xiaomi Global Vice President wuxuu xaqiijinayaa in POCO ay u shaqeyn doonto sidii astaan ​​madax banaan
Madaxweyne ku xigeenka Xiaomi Global ayaa hada ku dhawaaqay: laga bilaabo maanta POCO horeyba waa astaan ​​madax banaan.
Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa ka gudbaya shahaadada Bluetooth
Soo saaraha Oppo ayaa soo bandhigi doona telefoon jaban goor dhow. Waxay dhaaftay shahaadada Bluetooth SIG waxayna muujisay faahfaahinta koowaad.
Xasiloon Android 10 ayaa bilaabeysa inay ku timaaddo LG V50
LG V50 wuxuu hadda soo dhaweynayaa cusbooneysiinta ku daraya nidaamka hawlgalka ee Android 10 qaabkiisa deggan.
Huawei Y6s wuxuu si rasmi ah u yimid Spain: Helitaanka iyo qiimaha
Huawei Y6s hadda waxaa laga heli karaa Spain qiimo dhab ah oo tartan ah. Telefoon casri ah oo laga fiirsado inkasta oo loo tixgeliyo inuu yahay mid hooseeya.
Maanta waa cusbooneysiin muhiim u ah Mi Watch
Maanta, Janaayo 17, Xiaomi waxay soo bandhigtay cusbooneysiin muhiim ah oo loogu talagalay taleefannadeeda casriga ah ee loo yaqaan 'Mi Watch' kaas oo yimid oo lagu soo raray warar iyo shaqeyn cusub
Xiaomi Mi MIX 2S wuxuu durbaba helayaa xasilloon Android 10
Xiaomi hadda waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta xasilloonida Android 10 ee dhamaadka-sare MI MIX 2S. Cusboonaysiinta ayaa hoos imaanaysa MIUI 11.
Kaamirada Asus ROG Phone 2 waxaa qiimeeyay DxOMark, laakiin si heer sare ah looma qiimeyn
Barnaamijka tijaabada ee 'DxOMark' ayaa ku qiimeeyay kaamerada 'Asus ROG Phone 2' warbixinteeda cusub. Ogow sida ugu wanaagsan ee ay ku sameeyeen imtixaannadii!
Samsung Galaxy S20 waxaa lagu qabtay Geekbench
Nidaamka tijaabada ee Geekbench wuxuu ka diiwaan galiyay Samsung Galaxy S20 keydkiisa keyd qaar kamid ah qeexitaankiisa farsamo.
La kulan Lava Z71, oo ah taleefan casri ah oo aad u jaban oo la yimaada Mediatek's Helio A22
Lava Z71 waa taleefan casri ah oo cusub oo leh waxqabad hooseeya iyo tilmaamo farsamo.
Maqaarka xiga ee Fortnite ee ay Samsung ku siin doonto Galaxy S20 waa la sifeeyey
Sanadihii la soo dhaafay, Samsung waxay noo isticmaali jirtay inay ku siiso maqaar gaar ah dhammaan dadka isticmaala kuwa ku sharad ...
Soo dhaweynta ugu sareysa ee indhaha ee Galaxy S20 ayaa na siin doonta waxay noqon doontaa 5x
Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in ugu badnaan aragga indhaha ee ay bixiso Galaxy S20 uu noqon doono 5 koror oo aan aheyn 10 sidii lagu xaman jiray ilaa iyo haatan.
Doogee S95 Pro waa rasmi: Ogow dhammaan astaamaheeda
Doogee wuxuu rabaa inuu ku sii wado suuqa taleefannada rooga ah iyadoo la bilaabayo S95 Pro cusub, oo ah qalab heer sare ah.
Sawirada dhabta ah ee Xiaomi Mi 10 ee muujiya gebi ahaanba waa la sifeeyey
Sawirro cusub oo ka mid ah Xiaomi Mi 10 ayaa ka soo muuqday khadka tooska ah, taas oo xoog siineysa sheegashooyinka qaarkood ee la sameeyay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Android 10 waxaa loogu dhawaaqay Xiaomi Mi A3 wuxuuna imaan doonaa bisha Febraayo
Android 10 waxay kusii socotaa taleefannada gacanta ee Xiaomi. Noocaan cusub ee nidaamka mobilada ee Google ayaa hadda lagu dhawaaqay Mi A3.
Poco X2 waxaa lagu qoray diiwaanka Geekbench: wuxuu noqon karaa magaca 'Redmi K30'
Xiaomi waxay gacanta ku heysaa mobilo cusub, mid la imaan doona astaamo heer sare ah iyo tilmaamo. Waxaan ka hadlaynaa Poco X2.
Huawei wuxuu geeyay in ka badan 240 milyan oo taleefannada casriga ah adduunka oo dhan sannadka 2019
Shirkadda Huawei ayaa shaaca ka qaadday qoraalladii ugu waaweynaa ee ay diiwaangelisay sanadkii hore, iyadoo shaaca ka qaadday in shixnadaha moobaylka ee sannad kasta la soo diro ay ka badnaayeen 240 milyan oo unug
Samsung waxay ku shaqeysaa kiniin cusub oo raqiis ah oo S-Pen ah oo la jaan qaada iPad Mini
Iyadoo loo marayo tijaabooyinka qaarkood waxaan awood u yeelanay inaan ogaano qayb ka mid ah astaamaha Samsung tablet-ka SM-P615, oo ah nooc heer-gal ah oo lala yaabo.
Huawei P40 Pro wuxuu yeelan doonaa naqshad qalooca wuxuuna kori doonaa 52 MP shidma ah
Huawei wuxuu bilaabi doonaa qaabka P40 Pro meel ka baxsan munaasabad kasta maadaama ay tahay mid ka mid ah taleefannada sare ee shirkadda ee 2020.
Shaashadda Black Shark 3 waxay yeelan doontaa QuadHD + qaraar waxayna noqon doontaa 120 Hz
Sida laga soo xigtay macluumaad cusub oo lagu sii daayay Weibo, shaashadda taleefanka casriga ee Black Shark 3 wuxuu noqon doonaa QHD + qaraar iyo 120 Hz.
Samsung Galaxy Z Flip ayaa lagu muujiyey
Clip Samsung Galaxy Z wuxuu noqonayaa mid ka mid ah taleefannada ka yaabin doona dadka isticmaala shirkadda Korea laga bilaabo 2020.
Ma waxaad raadineysaa taleefan jaban? ZTE Blade A5 2019 hadda wuxuu ku kacayaa wax ka yar 70 euro
Haddii aad raadineyso taleefan jaban oo Android ah si aad uga baxdo jidkaaga ama carruurtaada, uga faa'iideyso qiimo dhimistan inaad ku iibsato jaban ZTE Blade A5 2019.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee dhabta ah ee Samsung Galaxy S20 Plus wuxuu xaqiijinayaa naqshadiisa
Muuqaal la soo duubay oo xaqiijinaya nashqadda Samsung Galaxy S20, oo muujinaya dhinacyo runtii layaab leh, sida moduleka kamaradda.
Bilicda 'Huawei P40' ayaa la muujiyay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan sawirada la bixiyay ee kiisaskooda
Sawirro la bixiyay oo ka mid ah kiisaska Huawei P40 ayaa baxsad ahaa, taasoo xaqiijineysa nashqadda horeyba loogu xamanayay ee casriga ah.
Telefoon cusub oo LG ah ayaa ka muuqday Geekbench: wuxuu ku imaan karaa LG K43
Barxadda baaritaanka Geekbench ayaa ku dhajisay liis cusub keydkeeda, taas oo u dhiganta LG K43.
Nooc cusub oo ka mid ah Huawei P30 Lite ayaa la yimid 6 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo ROM ah
Nooc cusub oo ah xusuusta RAM iyo meel gudaha lagu keydiyo oo ah taleefanka gacanta ee dhexdhexaadka ah ee Huawei P30 Lite ayaa si rasmi ah looga dhigay Boqortooyada Ingiriiska.
Beta lixaad ee Android 10 ee Galaxy S9 hadda waa la heli karaa
Samsung ayaa hadda sii deysay beta lixaad ee Android 10 oo leh lakabka hal-abuurka One UI ee Galaxy S9 iyo S9 +.
Bandhiga Galaxy S120 ee 20Hz ayaa ku koobnaan doona 1080p
Shaashadda Galax S20 waxay la shaqeyn doontaa heerka cusbooneysiinta ee 120 Hz kaliya xallinta 1080p, maahan 2k sidii markii hore lagu xamanayay.
TCL waxay tusi doontaa taleefannadeeda cusub laba maalmood kahor MWC 2020
TCL ayaa kahoreyn doonta MWC 2020 magaalada Barcelona waxayna soo bandhigi doontaa taleefano cusub oo hoos imaado magaca shirkada iyadoo aan meesha laga saari doonin Alcatel.
Dhamaan Galaxy S20 (Galaxy S11) waxay ku dhejin doonaan 12 GB oo RAM ah
Samsung's Galaxy S20 (Galaxy S11) ayaa ku dari doona astaamaha ugu fiican, oo ay ku jiraan qadar badan oo RAM ah iyo laba nooc oo processor ah.
OnePlus 8 waxaa ku jiri doona guddi dhan 120 Hz
Jiilka soo socda ee OnePlus, lambarka 8, wuxuu ku biiri doonaa shaashadda 120 Hz, sida uu sheegay madaxa fulinta ee shirkadda.
Redmi K30 5G wuxuu noqonayaa taleefankii ugu horreeyay ee Xiaomi oo leh shaashad 144 Hz ah
Redmi K30 5G wuxuu lahaan lahaa 144 Hz guddi Tayadaani waxay ka dhigeysaa mid ku haboon in lagu ciyaaro waxyaabo badan oo warbaahin ah isla markaana si habsami leh loogu ciyaaro ciyaaraha.
Shirkadda Huawei ee HiSilicon ayaa amar ku bixisay geeddi-socodka cusub ee 14nm ee shirkadda SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).
Ni Fei, oo ah madaxweynaha Nubia, ayaa shaaca ka qaaday in Red Magic 5G ay taageeri doonto bandhig leh heerka cusbooneysiinta 144Hz.
The Honor View30 Pro waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa MWC 2020 sida horeyba loo xaqiijiyay. Honor dhammaadkiisii ​​ugu horreeyay ee ugu sarreeya sannadka 2020.
Chipset-ka ciyaaraha ee 'Mediatek Helio G70' ayaa la soo saaray: kuwani waa qeexitaanadooda
Mediatek ayaa ugu dambayntii soo bandhigtay processor-keeda cusub ee loogu talagalay taleefannada dhexdhexaadka ah, oo aan cid kale ahayn Helio G70.
OnePlus wuxuu muujinayaa shaashadiisa 120Hz "Display Fluid" ee loogu talagalay OnePlus 8
Waxaa soo saaray Samsung, shaashadda OnePlus 8 wax badan ayey ballan qaadeysaa waxayna noqon doontaa tan ugu wanaagsan sanadka 2020 sida uu sheegayo madaxweynahooda Lau.
LG waxay rajeyneysaa inay soo ceshato suuqa qeybta mobilada sanadka 2021
LG waxay qorsheyneysaa inay soo ceshato inta badan suuqii lumay ee qeybta mobilada dhamaadka 2021. Taleefan casri ah oo aad u weyn oo noocaas ah ayaa la filayaa sanadka 2020.
Midkoodna Galaxy Bloom, ama Galaxy Fold 2, Samsung taleefanka casriga ah ee isku laaban looma yeeri doono Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip, tani waxay noqon kartaa magaca ugu dambeeya ee taleefanka casriga ah ee isku xiga ee shirkadda Kuuriyada Samsung ah
Xiaomi Black Shark 3 5G wuxuu ku imaan doonaa 16 GB oo RAM ah
Xiaomi waxay qorsheyneysaa inay soo saarto taleefan cusub oo ciyaar ah oo ka socda khadka Black Shark. Black Shark 3 5G wuxuu ahaan lahaa astaanta shirkadda.
Sawirradii ugu horreeyay ee Galaxy S20 + (Galaxy S11) waa la sifeeyey
Waxaan horeyba uheynay sawirradii uguhoreeyay ee xaday ee naqshadeynta Galaxy S20 +, oo ah naqshad aad ula mid ah S20 + oo leh module ka kooban 4 kamaradood.
Realme X2 Pro, qiimaha ugu fiican ee dhiirrigelinta super
Waxaan si buuxda u hubnaa inaad horey u maqashay shirkadda taleefanka ee Realme. Soo saare kale oo curdin ah oo ...
Xiaomi Mi A2 wuxuu durbaba helayaa cusbooneysiinta Android 10
Xiaomi Mi A2 bartamaha-dhexe wuxuu soo dhaweynayaa Android 10, nooca ugu dambeeya ee OS-ka Google ee mobilada.
OnePlus 8 Pro wuxuu u muuqdaa 12GB oo RAM ah Geekbench
Kahor dhacdada daahfurka ee OnePlus 8 Pro ma dhicin, Geekbench wuxuu horey u liis garaacay qaar ka mid ah qeexitaankiisa farsamo.
Qiimaha Samsung Galaxy S10 Lite iyo faahfaahinta
Bilihii la soo dhaafay, waxaan ka wada hadalnay qorshayaasha Samsung inay soo saaraan nooc Lite ah oo ka mid ah ...
Xiaomi waxay muujineysaa astaanta Weibo ee MIUI 12
MIUI 12 wuxuu noqon doonaa isdhexgalka xiga ee taleefannada gacanta ee Xiaomi. In kasta oo aysan faahfaahin ka bixin, haddana shirkadda ayaa goor dhow ku dhawaaqi doonta warkeeda.
Huawei Mate X waa kudhowaad 100.000 oo unug oo la iibiyo bishiiba
Iibinta Huawei Mate X ayaa shirkadda u horseedaysa inay ka shaqeyso sidii loo dabooli lahaa baahida weyn ee loo qabo qalabka laallaabi karo.
Gionee wuxuu ku soo laabtay suuqa isagoo wata taleefan cusub oo loo yaqaan 'Steel 5' waxaana loogu talagalay guud ahaan dadweynaha astaamaha u dhexeeya.
Vivo V1950A ayaa ka soo muuqanaya TENAA iyada oo nooc ahaan ah NEX 3 5G
Vivo waxay ka shaqeyneysaa soo saarida dhowr taleefano 5G ah Vivo V1950A ayaa ka mid noqon doonta ka dib markii ay marayaan FCC farsamadan.
Jaangooyooyinkii ugu dambeeyay ee Pixel 4 waxay ka dhigeen nidaamka aqoonsiga wajiga mid aan faa'iido lahayn
Qaar ka mid ah boosteejooyinka Pixel 4 iyo 4 XL waxay leeyihiin dhibaatooyin xagga nidaamka aqoonsiga wajiga kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay.
Realme 2 Pro waxay kuheshaa shaashadda amniga bisha Janaayo 2020 iyo in kabadan cusbooneysiinteeda cusub
Realme 2 Pro wuxuu helaa xirmo software cusub. Midkani wuxuu la yimaadaa ciladaha cilladaha kala duwan, qaababka cusub, iyo hagaajinta.
Bandhigga Galaxy S2 120hz 20K ayaa la xaqiijiyay
Haddii aad rabto inaad u weeciso khibrada shaashad kasta oo Samsung ah, sug Galaxy S20 iyo shaashadda 120hz.
Hisense wuxuu muujinayaa taleefan leh shaashad midabkeedu yahay e-ink
Hisense waxay muujisay taleefan leh shaashad midab elektaroonig ah oo CES 2020 ah, dhammaantood markay muujiyeen mid ka mid ah wixii hore.
Xiaomi's Mi Band 5 wuxuu yeelan doonaa shaashad ballaaran iyo taageerada NFC ee qof walba
Jiilka shanaad ee Mi Band 5 wuxuu isku dari karaa shaashad ballaaran iyo GPS caalami ah.
Galaxy Bloom, tani waxay noqon doontaa magaca Samsung casriga cusub ee isku laaban
Waxay umuuqataa inay durbaba rasmi tahay Samsung taleefankiisa cusub ee isku laaban la yiraahdo Galaxy Bloom oo aan loogu yeeri doonin Galaxy Fold 2.
Galaxy Tab S6 xaashida muraayadaha ayaa soo daatay
Xaashida suurtagalka ah ee Samsung Galaxy Tab S6 5G waa la daadiyay. Kiniiniga ayaa dhawaan ku dhici doona suuqa Kuuriya.
Kiisaskaasi waxay xaqiijinayaan naqshadda LG G9 ThinQ
Kiisas isdaba-joog ah ayaa xaqiijiyay naqshadda LG G9 ThinQ, oo u muuqan doonta inay lahaato akhristaha sawirka shaashadda iyo 4 kaamirooyinka.
Tecno Spark Go Plus, dhamaadka-hoose ee cusub ee ku kacaya 80 Euro
Tecno Spark Go Plus waa taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah oo qiimo aad u fiican ku leh lacagta.
Dhamaan taleefannada Huawei ee heli doona Android 10 (hadda)
Ku soo uruurinta dhammaan taleefannada gacanta ee Huawei ee heli doona EMUI 10 dhammaan bilaha soo socda ee sannadkan 2020: Huawei Mate 10, P20 iyo in ka badan
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mitu cusub ee Barashada Carruurta ee 4Pro iyadoo kuwa yaryar maskaxda lagu hayo. Daawasho ballaaran oo leh barnaamijyo badan.
Bisadda S32 waa khamaarka cusub ee Caterpilar ee adduunka casriga ah ee u adkaysta dhicitaanka iyo naxdinta.
Nokia 6.1 wuxuu helaa nooca xasiloon ee Android 10
HMD Global ayaa soo saartay casriyeyntii aadka loo wada sugaayay ee Android 10 ee loo yaqaan Nokia 6.1, oo ah taleefan casri ah oo suuqa soo galay labo sano ka hor.
Bandhigyadii ugu horreeyay ee Sony Xperia 5 Plus ayaa la muujiyay
Sony's Xperia 5 Plus ayaa lagu sii daayay markii ugu horreysay ee CAD bixiyeyaasha ka hor inta aysan si rasmi ah uga soo muuqan dhacdooyinka shirkadda Japan.
Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Redmi Note 7, Note 8 Pro, K20 / Mi 9T waxay helayaan MIUI 11 beta oo ku saleysan Android 10
Shan nooc oo Xiaomi ah ayaa qaata MIUI 11 oo kujira Android 10, waana Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 SE, Redmi Note 7, Note 8 Pro iyo Redmi K20 / Mi 9T.
Xiaomi Mi Box S wuxuu helayaa cusbooneysiintiisa ugu badan ee la filayo
Xiaomi Mi Box S, sanduuqa TVga Android ee caanka ah ee soo saaraha Aasiya ayaa hadda helay cusbooneysi cusub oo hagaajinaya shaqadiisa.
Samsung waxay soo saartay moobayl wata batariga la isku beddeli karo, Galaxy XCover Pro oo ah 550 XNUMX
Taleefan leh halbeeg milatari oo iska caabin ah oo lagu gartaa naqshad ka casrisan tii hore ee Samsung Galaxy X Cover.
Barnaamijka SmartThings ee Samsung wuxuu leeyahay in kabadan 50 milyan oo isticmaale firfircoon
Codsiga Samsung ee maareynta aaladaha ku xiran hadda wuxuu leeyahay in ka badan 50 milyan oo isticmaale firfircoon
Realme C2s ayaa loogu dhawaaqay suuqa Thai
Realme waxay suuqa Thai ka bilawday casriyeyn casri ah oo loo yaqaan 'Realme C2s'. Telefoonku wuxuu ku yimaadaa qiimo jaban.
TCL waxay ku dhawaaqeysaa 10 saf oo leh 10 5G, 10 Pro iyo 10L moodal
TCL waxay go'aansatay inay kor uqaaddo oo ay ku dhawaaqdo aaladaha cusub ee mobilada iyadoo hoos imaanaysa astaanteeda inkasta oo ay sii wado aaminaada Alcatel
Noocyada buuxa ee Samsung Galaxy XCover Pro ayaa la helay
Galaxy XCover Pro waa aalad IP68 la aqoonsan yahay oo leh jiis qafiif ah oo polycarbonate ah oo ka ilaaliya boodhka, biyaha iyo saamaynta.
Miyuu Samsung Galaxy Fold 2 ka jaban doonaa? Tani waa sida soosaaruhu u gaari doono
Waxaan maqalnay warar xan ah muddo dheer oo ku saabsan bilaabida Samsung Galaxy Fold 2, oo ah nooc raqiis ah oo taleefanka shirkadda isku laaban. Sidan ayey ku heli doonaan
Shaashadda Samsung Galaxy S20 waxay noqon doontaa mid ka mid ah jibbaaradeeda ugu weyn
Macluumaad cusub ayaa la helay oo xaqiijinaya in shaashadda Samsung Galaxy S20 ay noqon doonto ta ugu wanaagsan taleefankan: wuxuu ku shaqeyn doonaa 120 Hz.
Coolpad Legacy 5G waxaa lagu dhawaaqay Snapdragon 765 oo loogu talagalay heerka dhexe iyo sare
Coolpad Legacy 5G waa taleefan cusub oo casri ah oo dhexdhexaad ah oo lagu dhawaaqay Snapdragon 765 iyo taageerada 5G.
Android 10 wuxuu yimaadaa safka Xperia XZ2 iyo Xperia XZ3
Sony ma ilaawdo inay cusbooneysiiso taleefannada la sii daayay intii lagu jiray 2018. Hadda waa wareegga afar taleefannada casriga ah ee khadka XZ.
TCL waxay ku dhawaaqeysaa Alcatel 3L cusub, 1S, 1V iyo 1B
TCL waxay soo bandhigtay ilaa afar telefoon oo cusub oo la bilaabi doono inta lagu jiro rubuca koowaad: Alcatel 3L, 1S, 1V iyo 1B.
Oppo wuxuu rukhsad u siiyaa taleefan kamarad pop-up ah
Oppo wuxuu rukhsad u helay taleefan leh kamarad pop-up ah, gaar ahaan waxay ka muuqataa mid ka mid ah dhinacyada qalabka mobilada.
Samsung Galaxy Tab A4S Waxaa lagu taxay FCC
Samsung Galaxy Tab A4S kiniinkiisa ayaa ka soo muuqday FCC si faahfaahsan, wuxuu ka maqnaa processor-ka, RAM iyo keydinta.
Maamuusku wuxuu ku dhawaaqay dhacdo cusub Janaayo 14
Maamuusku wuxuu rabaa inuu ku bilaabo sanadka lugta midig, tan awgeedna waxay ku dhawaaqday dhacdo soo bandhigid cusub, oo loo qorsheeyay bisha soo socota ee Janaayo 14.
Xiaomi Black Shark 3 wuxuu imaan doonaa bisha soo socota isagoo wata bateri ka weyn kuwii ka horeeyay
Xiaomi Black Shark 3 wuxuu imaan doonaa bisha soo socota isagoo wata bateri ka weyn kuwii ka horeeyay. Tani waxay yeelan doontaa xamuul dhakhso leh oo ah 30 W ama ka sareeya.
Adeegyada iyo barnaamijyada Google waxay sii wadi doonaan inay ku beddelaan kuwa Xiaomi noocyada caalamiga ah ee mobiladooda
Dhammaan qalabka Xiaomi, oo ka bilaabmaya Mi 9T Pro, oo laga bilaabay meel ka baxsan Shiinaha, ayaa lagu rari doonaa barnaamijka Google Phone iyo Farriimaha horay loo sii rakibay.
Sawiradii la moodayay ee OnePlus 8 Lite ayaa soo muuqday waxayna muujinayaan dhamaan qaabkeeda
Laba sawir oo ka mid ah eedeymaha loo haysto ee loo yaqaan 'OnePlus 8 Lite' ayaa lagu faafiyey khadka tooska ah ee internetka, taas oo muujineysa isla markaana beenineysa qaar ka mid ah faahfaahintii hore ee sharraxaadda shirkadda.
Galaxy S11 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay Febraayo 11
Samsung ayaa si rasmi ah u xaqiijisay taariikhda soo bandhigida ee Galaxy S11, waxay noqon doontaa mar kale, oo ka baxsan qaab-dhismeedka Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka ee lagu qabtay Barcelona
Samsung Galaxy Fold 2 ayaa imaan doonta iyada oo lagu soo dallacayo si dhakhso leh
Samsung Galaxy Fold 2 waxaa ku jiri doona lacag aad u dhakhso badan oo qalabku ku soo dallaco waqti aan dheereyn, waana wax aan ku aragnay Galaxy S10 5G
LG G9 wuxuu ka muuqdaa kamaradaha afar geesoodka ah
Bixiyayaashii ugu horreeyay ee muuqaalka xiga ee LG, G9, ayaa xaday. Wax walba waxay muujinayaan inay arki doonaan iftiinka MWC sanadkan.
Toddobadan taleefanada Huawei iyo Honor waxay horeyba u xaqiijiyeen beta-ka EMUI 10 oo ku saleysan Android 10
Shirkadda Huawei ee Android Q-ku saleysan EMUI 10 ayaa ballaarin doonta illaa toddobo taleefanno kale, waa xisaab rasmi ah oo ku taal Weibo, shabakadda bulshada ee microblogging ee Shiinaha ayaa xaqiijisay.
Ha sugin wax intaa ka sii badan: kamarad gadaal saddex-laab ah waa waxa Huawei P40 la imaan lahaa
Sawir ayaa soo muuqday waxa loo maleynayo inay tahay kamarad isku imaatin ka mid ah shirkadda soo socota ee Huawei P40.
Xiaomi Mi 10 shaashadda shaashadda ayaa soo muuqata oo muujineysa muraayadda qalooca ee mobilka
Marka loo eego waxa shaashadda sii daayay ee shaashadda shirkadda 'Xiaomi Mi 10' ay muujineyso, waxay lahaan doontaa geesaha qalooca mana lahaan doonto wax nabaro ah.
Realme X2 iyo X2 Pro waxay helayaan boogta amniga ee Diseembar 2019 iyo horumarinno kala duwan
Realme waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta softiweer ee u gaarka ah Realme X2 iyo X2 Pro. Kuwani waxay la yimaadaan cilado qalaba oo kala duwan.
Fiidiyowga xayeysiinta ee dhacdadii Samsung Unpacked ayaa la daadiyay oo muujinaya taariikhda la ogaanayo
Fiidiyow xayeysiin ah oo ku saabsan dhacdadii Samsung Unpacked ayaa u muuqatay mid muujinaysa taariikhda la dhammaystiray. Waxay ka dhici kartaa magaalada New York, USA.
Vivo waxay ku diyaarinaysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee Snapdragon 765G waxayna ku tijaabisaa Geekbench
Heerka 'Geekbench benchmark' ayaa ku taxay taleefoonkii ugu horreeyay ee Vivo oo leh processor-ka Snapdragon 765G ee keydkiisa.
Google Pixel 4a wuxuu ku garaaci karaa suuqa hal shaashad midab leh iyo midab cusub
Xanta ugu dambeysa ee laxiriirta Pixel 4a waxay ina tusaysaa sida moodelkan cusub uu suuqa ugu dhici karo kaliya hal cabir shaashad iyo midab cusub.
Xiaomi Watch Color ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Xiaomi waxay ka dhigeysaa mas'uulka cusub ee Watch Color watch ee Shiinaha ka dib markii ay soo dusaan qalab kala duwan oo casri ah.
Samsung Galaxy A51 iyo Galaxy A71 waxay muujinayaan qiimahooda iyo imaanshahooda Yurub
Shirkadda laga leeyahay Koonfurta Kuuriya ee Samsung ayaa shaaca ka qaaday qiimaha taleefannada Samsung Galaxy A51 iyo Galaxy A71 ee dalka Holland.
Qeybaha caalamiga ah ee Xiaomi Mi 9T iyo Redmi K20 waxay helayaan xasilloon Android 10 oo hoos timaada MIUI 11
Qeybaha caalamiga ah ee Xiaomi Mi 9T iyo Redmi K20 waxay hadda helayaan cusboonaysiinta Android 10 ee hoos imanaya MIUI 11 adduunka.
Shirkadda Huawei waxay ku dhawaaqday qorshooyin ay ku iibinayso processor-keeda HiSilicon shirkado kale
Shirkadda Huawei ee IC-hoosaad ka ah HiSilicon ayaa dhowaan ballaarin doonta astaamaha suuqa processor-ka.
Huawei ama Xiaomi midkoodna: in kabadan kalabar mobilada 5G waxaa geeyay Samsung sanadkii hore
In ka badan 6.7 milyan oo taleefannada casriga ah ee Samsung Galaxy ah oo leh 5G taageero ayaa la geeyay adduunka oo dhan sannadka 2019.
Kuwani waa qeexitaannada Realme X50 5G ee ay TENAA taxday
Qaar ka mid ah astaamaha iyo qeexitaanada farsamo ee Realme X50 5G premium-bartamaha-dhexe ayaa lagu faahfaahiyay liistada TENAA.
Samsung waxay soo saareysaa Galaxy S10 Lite iyo Note 10 Lite isla waqtigaas
Isla mar ahaantaana, shirkadda Kuuriya waxay farta saareysaa sawirrada makro iyo S Pen ee Galaxy Note 10 Lite iyo S10 Lite. Sharad aad u yar
Samsung ayaa hogaamisay suuqa casriga 5G ee 2019
Waad ku mahadsan tahay labada moodel ee leh teknoolojiyadda 5G ee Samsung ay soo saartay 2019, shirkadda Kuuriya ayaa ku guuleysatay inay hoggaamiso suuqa
Sony waxay soo bandhigi doontaa "aragtida gaarka ah ee mustaqbalka" 6da Janaayo
Sony waxay diyaar u tahay inay bixiso ogeysiiska bisha Janaayo 6, dhammaantood saacado gudahood markay bilaabaan dhacdada CES 2020 ee Las Vegas qaar ka mid ah qalabkeeda soo socda.
Samsung Galaxy M21 waxa ku daatay macluumaad ka socda M11 iyo M31
Tilmaamo badan oo ka mid ah Samung Galaxy M21 waa la sifeeyey, oo ay weheliyaan hooska Samsung Galaxy M11 iyo Galaxy M31.
Wareegii saddexaad ee cusbooneysiinta Android 10 ee loogu talagalay OnePlus 6 iyo 6T ayaa la bilaabay
The OnePlus 6 iyo 6T ee helaya casriyeynta nidaamka qalliinka Android 10 markii saddexaad.
ZTE Axon 10s Pro wuxuu noqon lahaa taleefankii ugu horreeyay ee ganacsi ee leh Snapdragon 865 chipset
TENAA waxay ku xaqiijisay ZTE's Axon 10s Pro keydkeeda xogta, taasoo muujineysa inay noqon karto taleefankii ugu horreeyay ee Snapdragon 865 ee suuqa yaalla.
Oppo Find X2 waxaa si maldahan u sheegay maamulayaasha shirkada ugu sareysa in dhawaan lasoo bandhigo
Madaxweyne ku xigeenka Oppo iyo Madaxweynaha Suuqgeynta Caalamiga ah Brian Shen ayaa u dhaqaaqay Weibo si ay ugala hadlaan imaatinka Oppo Find X2.
Realme 5i wuxuu kujiraa keydka Geekbench
Barnaamijka tijaabada Geekbench ayaa ku qiimeeyay taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Realme 5i smartphone' ee loo yaqaan 'Snapdragon 665' ka hor intaan la bilaabin.
Realme X50 wuxuu maraa Geekbench, isagoo xaqiijinaya astaamahiisa
Dhammaan faahfaahinta Realme X50, taleefanka cusub ee shirkadda Aasiya oo tilmaamaya siyaabaha loo noqon karo loolanka cusub ee K30 ee Redmi iyo Xiaomi
Amazfit-T-Rex cusub, waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 8 Janaayo
8da Janaayo, Huani wuxuu si rasmi ah u soo bandhigi doonaa smartwatch-keeda cusub, Amazfit T-Rex, smarwatch iska caabin ah oo loogu talagalay cayaaraha
Samsung waxay diiwaangelineysaa sagaal moodal oo ah khadka Galaxy A
Samsung waxay go'aansatay inay diiwaangeliso sagaal nooc oo taxane A ah oo loogu talagalay koorsada 2020 wax walbana waxay tilmaamayaan taas sidoo kale sanadka soo socda.
Nooca ugu dambeeya ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy Note 9 ayaa hadda la heli karaa
Nooca ugu dambeeya ee Android 10 ee loogu talagalay Galaxy Note 9 ayaa hadda la heli karaa, inkasta oo xilligan oo keliya Jarmalka
Alcatel 3T 10 4G wuxuu u yimaadaa inuu yahay kiniin is dhexgal ah
Alcatel wuxuu soo saarayaa kiniin si cadaalad ah u dhexgala oo codkeenu ku filan yahay hadaan rabno inaan ku raaxeysano muusikada, fiidiyowyada iyo barnaamijyada.
Xiaomi Mi MIX 3 wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysiinta xasilloon ee MIUI 11 oo ku saleysan Android 10
Xasiloonida Android 11-ku saleysan MIUI 10 UI ayaa ugu dambeyntii bilaabaya inay u socoto Mi MIX 3 ee Shiinaha, sida ay sheegayaan warbixino kala duwan.
Shirkadda Huawei waxay u qaybisaa 12 milyan oo xarig ah Mate 30
Khadka Mate 30 wuxuu sii wadaa inuu noqdo midka ugu badan ee looga baahan yahay adeegsadayaasha doonaya taleefan dammaanad qaadaya qiimaha waxqabadka.
Realme 5i waxay xaqiijineysaa imaatinkeeda: Janaayo 6
Waxaan horeyba u haysanay taariikhda imaatinka Realme 5i waxyar uun ka badan xaqiijinta waddanka uu marka hore imaan doono. Waxay timaaddaa horraanta 2020.
EMUI 10 beta furan ayaa hadda loo heli karaa taxanaha MediaPad M6
Kahor furitaanka MatePad Pro, Huawei wuxuu ku dhawaaqay taxanaha MediaPad M6. Tan waxaa ka mid ah nooca 8.4-inji ah, ...
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa daawashada Midabka Watch Janaayo 3
Xiaomi ayaa ku dhawaaqday smartwatch Watch Watch smartwatch cusub ee 3-da Janaayo Shiinaha. Waxaan ka dooran karnaa in ka badan 1.000 midab.
Oppo waxay ku muujineysaa F15 fiidiyow cusub
Oppo waxay Hindiya ka soo saari doontaa taleefan casri ah oo cusub oo loo yaqaan F15, waxay noqon doontaa caanka caanka ah ee Oppo A91 oo maalmo ka hor laga bilaabay Shiinaha.
Kuwani waa kiniinnada Samsung iyo mobilada ee heli doona Android 10: taariikhaha la xaqiijiyay
Muddo dheer ayaan sugeynay soo saaraha Kuuriya si uu u xaqiijiyo midka moodelkiisa loo cusbooneysiin doono nooca cusub ee nidaamka ...
Isticmaalayaasha iyo horumariyeyaasha leh Redmi Note 8 Pro waxay moobiladooda u beddeleen leben
Laga soo bilaabo Twitter, Xiaomi waxaa looga baahan yahay inay xal u hesho dhibaatada lebenka ee Redmi Note 8 Pro milkiilayaasha taleefankan.
Samsung casriga cusub ee isku laaban ayaa suuqa soo gali doona ka hor Galaxy S11
Taleefanka casriga ah ee laabma ee shirkadda Korea ee Samsung, ayaa suuqa soo gaari kara ka hor Galaxy S11
Sawir cusub oo ku saabsan qeybinta kaamirooyinka Galaxy S11
Sawirkii ugu dambeeyay ee xaday ee Galaxy S11 + wuxuu ina tusayaa sida qeybta dambe uu uga koobnaan doono 4 kamarad oo 5 uusan aheyn sida markii hore lagu xamanayay.
Ka fogow calaamadaha shaashadda TV-gaaga teknolojiyada QLED ee Samsung
Isbeddelka ku yimid shaashadaha LCD ee tayada muuqaalka ma ahan tiknoolajiyadda OLED, laakiin waa QLED ay Samsung nagu siiso telefishannadeeda.
Xiaomi Mi Watch Premium Edition waa dib loo dhigay illaa bisha Febraayo
Nooca 'Premium Edition' ee Xiaomi's Mi Watch wuxuu dib u dhigaa bilaabitaankiisa. Soo-saaraha ayaa doonaya inuu helo waqti dheeri ah oo uu ku ballaariyo kaydka.
Khadka Oppo Reno 3 wuxuu gaarayaa 1,46 milyan oo rikoor
Khadka loo yaqaan 'Oppo's Reno 3 line' ayaa sababay diiwaanno aad u tiro badan oo xiisaynaya Shiinaha markii lagu dhawaaqay 26-kii Diseembar
Vivo waxay dhowaan soo bandhigi doontaa muuqaalka digniinta dhulgariirka ee FunTouch OS 10
Maamulaha Mashruuca Vivo FunTouch OS 10 ayaa shaaca ka qaaday inay hada ku hawlan yihiin muuqaal cusub oo loogu magac daray Digniinta Dhulgariirka.
Pixel 4a waxaa lagu muujiyay qaabab cusub oo leh shaashad dalool ah [+ Video]
Pixel 4a wuxuu ka muuqday muuqaal-muuqaal ah oo si buuxda u muujinaya. Shaashadeeda daloollan ayaa lagu arki karaa iftiinka dadweynaha.
Xiaomi wuxuu shatiyeeyay taleefan dhinac dhinac ka furaya
Xiaomi waxay sii waddaa inay lahaato lahaansho moodooyin cusub, sida taleefan awood u leh inuu ku soo baxo dhinac ka mid ah dhinacyadiisii ​​sidii horeba loo arkay.
Buugga isticmaalaha ee Samsung Galaxy S10 Lite ayaa muuqda
Buugga adeegsadaha ee Samsung Galaxy S10 Lite ayaa soo muuqday ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin wuxuuna muujiyey faahfaahinta telefoonka.
Samsung Galaxy S11 + wuxuu helayaa shahaadada Bluetooth
Samsung Galaxy S11 + ayaa ka gudubtay shahaadada Bluetooth ku dhowaad laba bilood ka hor soo bandhigideeda iyo sii deynta xigta ee suuqa.
Nokia-hooseeya oo leh Snapdragon 215 ayaa helaya shahaadada Bluetooth
Nokia waxay umuuqataa inay leedahay mobilo moobil kale oo shaqooyinka kujira. Moodelku wuxuu dhowaan ka soo muuqday lambarka nambarka 'TA-1213' ee ku yaal websaydhka Bluetooth SIG.
Qalabka TSMC ee 14nm chip siiya Huawei waxaa carqaladeyn kara Mareykanka
Sida laga soo xigtay warbixinnada qaar, bixinta 14 nm chips oo ka timid TSMC ilaa Huawei waa la joojin karaa sababo la xiriira tallaabooyinka uu Mareykanku qorsheynayo inuu hirgeliyo.
Shirkadda Huawei ayaa beenisay eedaha WSJ ee ah inay ka heshay Shiinaha $ 75 bilyan oo dollar
Markale Huawei waxaa lagu eedeeyay inuu "daaweyn gaar ah" ka haysto dowladda Shiinaha taas oo aan caafimaad u qabin tartamayaasheeda.
Xiaomi Mi 10 wuxuu lahaan karaa batari ku dhow 5000 Mah
Mar labaad waxaan kahadleynaa batariga batroolka xiga ee Xiaomi, oo ah Mi 10. Tan waxaa lasheegay inay kudhowaad tahay 5000 mAh.
Galaxy S11 ayaa la soo bandhigi lahaa ka hor intii aan la fileynin
Galaxy S11 wuxuu imaan doonaa todobaad ka hor inta aan la fileynin suuqa, iyadoo la soo bandhigi doono Febraayo 11, sida ay soo warisay warbaahinta kala duwan.
Beta-kii afaraad ee Android 10 ee Galaxy S9 iyo S9 + hada waa la heli karaa
Bishii Diseembar 20, ragga Samsung ayaa bilaabay beta saddexaad ee Android 10 oo leh lakabka ...
Vivo S1 Pro waxay timid Hindiya Janaayo 4
Hindiya waxay heli doontaa Vivo S1 Pro horaanta bisha Janaayo oo leh laba midab waana shaki la’aan inay tahay mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee laga filayo astaanta Aasiya.
LG Neon Plus taleefan aasaasi ah ayaa dillaacaya
Bixinta taleefanka soo socda ee soo saaraha LG ayaa soo muuqday. Waxaa loogu yeeri doonaa LG Neon Plus waxayna ujeedadeedu tahay in lasoo bandhigo inta lagu jiro CES 2020.
Tani waa sida 60X zoom ee Vivo X30 Pro kamaraddeeda periscope u shaqeyso
Waxaan ka haynaa shaybaarada kaamirada Vivo X30 Pro casriga oo muujineysa cajaa'ibka weyn ee 60X zoom. Halkan ka eeg!
Batariga Xiaomi Mi 10 Pro waxaa si buuxda loogu soo oogi doonaa kaliya 35 daqiiqo!
Xiaomi Mi 10 Pro wuxuu lahaan doonaa batariyaal lagagasoo oogi karo min madhan ilaa buuxda 35 daqiiqo oo keliya iyadoo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda xawaaraha degdegga ah ee 66-watt ah.
Samsung Galaxy Note 9 wuxuu helayaa beta-kii shanaad ee Android 10
Beta cusub - kii shanaad, inuu noqdo mid sax ah - wuxuu bilaabayaa inuu u kala firdho calanka Samsung Galaxy Note 9.
Galaxy S10 Lite iyo Note 10 Lite ayaa lagu soo bandhigi doonaa CES 2020
Sida aan ka aqrin karno warbaahinta Kuuriya Herald, Galaxy S10 Lite iyo Note 10 Lite waxaa lagu soo bandhigi doonaa CES 2020 ee Las Vegas
ZTE Axon 10 Pro wuxuu helayaa cusbooneysiinta MiFavor 10 ee Android 10 ee ku saleysan Android
Isku xidhka isticmaalaha '10 10' ee ku xidhan 'Android' ee 'MiFavor 10' ayaa imanaya ZTE Axon XNUMX Pro iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub oo software ah.
Sawiradan dhabta ah ee Realme X50 waxay xaqiijinayaan naqshadeeda
Sawirro taxane ah oo dhab ah oo Realme X50 ah ayaa la soo saaray, halkaas oo aan ku xaqiijin karno sida uu noqon doono naqshadda taleefankan cusub ee Android-ka ah.
LG V60 ThinQ 5G waxaa looga dhawaaqi doonaa MWC 2020
LG wuxuu soo bandhigi doonaa beddelka V50 ThinQ 5G ee Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka 2020 ee Barcelona. Shirkadda ayaa ku dhawaaqi doonta V60 ThinQ 5G.
Oppo Reno 3 iyo Reno 3 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Oppo waxay ka dhigtay Reno 3 line rasmi rasmi ah laba qalab oo la iibin doono bisha Janaayo: Reno 3 iyo Reno 3 Pro.
Telefoonnada casriga ah ee leh shaashadda AMOLED ayaa ka badnaan doona 600 milyan oo unug oo la iibiyey sannadka 2020
Iibinta caalamiga ah ee taleefannada gacanta ee leh AMOLED allo ayaa ka badnaan doona 600 milyan oo cutub dhammaadka 2020, iyadoo kororka sannad-sannadeedka uu yahay 46%.
Realme X50 Sanduuqa Tafaariiqda Ayaa Soo Baxaya, Muujinaya Kaamirada Hore Ee Labada Lugood Leh Ayaa Laheyn Doonaa
Waxa cusub ee hadda noo imanaya waxay ku saabsan yihiin sanduuqa tafaariiqda ee Realme X50 iyo kamaradda hore ee laba-geesoodka ah ee ay adeegsan doonto.
Huawei Nova 6 SE ayaa hadda ugu dambeyntii loo heli karaa iibsashada joogtada ah ee Shiinaha
Huawei Nova 6 SE hadda si joogto ah ayaa looga helaa suuqa Shiinaha. Ogow dhammaan faahfaahinta ganacsigeeda!
Qalabka MediaTek Dimensity 800 ayaa lagu dhawaaqay qalabka dhexdhexaadka ah
Mediatek waxay ku dhawaaqday barnaamijkeeda cusub ee mobilada loogu talagalay taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah. Tan waxaa lagu magacaabaa Dimensity 800 waxayna imaan doontaa sanadka 2020.
Galaxy A10 waa taleefanka gacanta ee ugu iibinta badan Android rubucii la soo dhaafay
Samsung's A10 waa midka ugu iibinta badan ee casriga ah ee ay maamusho Android wareegga bilaha July-September 2019.
Samsung-dhamaadka-sare wuxuu beddeli karaa magacaabiddiisa 2020
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira Galaxy S11 waxay soo jeedinayaan in aan loogu yeeri doonin taas, laakiin ay noqon laheyd Galaxy S20
Bangiga cusub ee Samsung Power Bank wuxuu marayaa FCC
Samsung waxay qorsheyneysaa inay soo saarto 25 W Power Bank cusub oo ku habboon aaladaha ugu dambeeyay ee mobilada ee khadadka Galaxy.
Samsung Galaxy M31 wuxuu maraa Geekbench
Samsung Galaxy Galaxy M31, dhaxal sugaha Galaxy M30 iyo Galaxy M30s, ayaa la helay. Qeexitaannadiisa koowaad waxaa lagu yaqaan iyadoo loo marayo Geekbench.
Huawei Mate X2 oo ah taleefan gacmeedka isku laaban ayaa la bilaabi doonaa rubuca saddexaad ee 2020
Marka loo eego waxa koontada @ RODENT950 ay ku soo gudbisay Twitter-ka, Huawei wuxuu ku dhawaaqi doonaa Huawei Mate X2 saddexda bilood ee saddexaad ee sannadka soo socda.
Waxay kala laabtaan codsi fariin ah Bakhaarka Play Store sababo la xiriira eedeymo basaasnimo
Codsiga ToTock waxaa lagala noqday labada Play Store iyo App Store labadaba sababo la xiriira eedeymo basaasnimo oo culeyskiisa saaran.
Sony kuma sii socon karto baahida loo qabo dareemayaasha muuqaalkeeda
Kordhinta baahida loo qabo dareemayaasha sawirka ee soo saareyaasha badankood ayaa dhibaato ku ah Sony.
Galaxy Fold 2 ayaa mar kale soo muuqanaya oo Galaxy S11 wuxuu noqon lahaa Galaxy S20
Sawir cusub oo Samsung Galaxy Fold 2 ah ayaa u muuqda mid muujinaya taleefanka mar kale. Galaxy S11 wuu sii socon lahaa si uu u beddelo nambarka nambarka.
Realme X50 5G iyo nooca Lite waxaa la soo bandhigi doonaa Janaayo 7
Waxaan horeyba u haysanay taariikh sax ah oo loogu talagalay soo bandhigida sumadda cusub ee Realme X50 5G, qalabka soo socda ee leh isku xirnaanta sare shirkadda Shiinaha.
Huawei wuxuu bilaabi doonaa barnaamijyadiisa u gaarka ah dhamaadka bisha
Huawei wuxuu sanadka ku dhamaan doonaa iyada oo bilaabi doonta barnaamijyadeeda iyo iyada oo la bilaabayo nidaamkeeda hawlgalka u gaarka ah si loola tartamo Google.
Ma waxaad raadineysaa mobiil wanaagsan oo raqiis ah? Realme 5 Pro waa ka raqiisan yahay weligiis Amazon
Imaatinka ciidaha Kirismaska, shirkadaha waawayn waxay fursad u siinayaan inay bilaabaan qiimo dhimis ku saabsan noocyadooda kala duwan ...
Samsung Galaxy Tab S6 5G oo lagu muujiyay liis garaynta
Samsung Galaxy Tab S6 5G ayaa lagu soo bandhigay liis xayeysiin ah oo la iibin doono wax ka yar dhowr toddobaad.
Redmi K20 wuxuu bilaabay inuu helo Android 10
Sannadku wuu dhammaaday, laakiin maahan akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay isticmaaleyaasha Redmi K20. Qalabkani wuxuu durbaba helayaa cusbooneysiin cusub.
Xiaomi waxay soo bandhigaysaa barbaraha mugga ee MIUI 11
Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigtay barbaraha mugga ee MIUI 11 kaas oo kuu oggolaanaya inaad la qabsato mugga iyadoo ku xiran da'da isticmaalaha.
Noocyada 5G ee Samsung Galaxy Note 10 Plus iyo Galaxy S10 oo ka socda Verizon waxay helayaan Android 10
Samsung ayaa sii deyn doonta nooca xasilloon ee Android 10 ee Galaxy S10 iyo Galaxy Note 10 safka from
Xiaomi Mi Note 10 Pro ayaa hadda laga heli karaa Spain
Xiaomi Mi 10 Pro hadda si rasmi ah ayaa looga iibsan karaa Spain 649 euro.
Realme X50 5G, faahfaahin ayaa la soo bandhigi doonaa berri
Berri waan ogaan doonnaa dhammaan faahfaahinta calanka Realme ee soo socda, X50 5G. Waxay noqon doontaa mid ka mid ah taleefannadii ugu horreeyay ee shirkadda 5G.
Vivo waxay ku tusi doontaa taleefan casri ah MWC 2020
Vivo waxay xaqiijisay ka qeyb galka Shirka World Mobile Congress 2020 ee magaalada Barcelona. Wuxuu ku sameeyaa astaamo iyo muujinta V ee asalka.
[VIDEO] Tani waa sida Galaxy Note 10 uu ula duulo Android 10 One UI 2.0: waxqabadka, dhaqdhaqaaqyada cusub iyo wararka
Tilmaamaha cusub ee Android 10, hagaajinta sawir qaadista, waxqabadka weyn ee la gaadhay iyo waxyaabo kale oo badan ayaan kugu tusaynaa One UI 2.0 ee Galaxy Note 10.
Huawei wuxuu u isticmaali lahaa HarmonyOS barnaamijyada smartwatches sanadka 2020
Huawei wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo isticmaalka HarmonyOS qalabkiisa 2020 iyo saacadaheeda caqliga leh ayaa u xigi doona isticmaalka.
Caddaymaha Galaxy Note 10 Lite ayaa xaday
Faahfaahinta Galaxy Note 10 Lite horey ayaa loogu sii daayay shabakadda waana ognahay wax walba oo ku saabsan taleefankan sidan.
Realme waxay damacsan tahay inay suuqa Aasiya ku soo bandhigto laba taleefan oo cusub iyada oo loo marayo magacyada 5i iyo C3. Labada noocba waxay horey u mariyeen shahaadada IMDA.
Waxaa jiri doona Pocophone cusub, gaar ahaan F2. Halkaas ayey imaan doontaa sanadka 2020 waxayna ku sameyn doontaa iyada oo astaamo runtii muhiim u ah adeegsadaha.
Qaadashada waxaan leenahay Zoran GCAM oo si buuxda u shaqeynaya waxaanan ku bareynaa sida loo soo dejiyo, u kici faylka xml oo aad hore ugu hagaajiso Xusuusta 10.
Motorola Razr ayaa wakhti dheer ku qaadan doonta inay suuqa gaarto sababo la xiriira baahida weyn ee ay ka heshay Mareykanka oo hadda imaan doonta bisha Janaayo.
Shirkadda Huawei waxay soo diri doontaa 230 milyan oo taleefannada casriga ah sannadkan
Huawei wuxuu kori doonaa 2019 tirada shixnadaha taleefannadeeda adduunka. Astaantu waxay dooneysaa inay ku soo dhowaato shirkadda ay la tartameyso ee Samsung.
Shaaciyey dhammaan astaamaha Samsung Galaxy S10 Lite
Dhammaan astaamaha Samsung Galaxy S10 Lite ee soo socda ee Jarmalka waa la daadiyay. Terminal aan aad u yareyn oo leh waxqabad sare.
Realme X2 ayaa ugu dambeyn laga bilaabay Hindiya iyadoo la adeegsanayo Snapdragon awood leh oo gaaraya 730G
Dhex-dhexaadka Realme X2 ayaa ugu dambeyn si rasmi ah looga dhigay suuqa Hindiya. Halkaas ayey ku tagtaa iyada oo leh moobil awood badan leh.
Shirkadda Huawei ee EMUI 10 waxay gaadhay in ka badan 10 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon iyo in ka badan 33 moodeellada moobiilka
Huawei waxay si rasmi ah u shaacisay in tirada adeegsadayaasha cusboonaysiinta EMUI 10 ay kor u dhaaftay 10 milyan oo isticmaale adduunka.
Beta-saddexaad ee Android 10 ee Galaxy S9 hadda waa la heli karaa
Beta-kii saddexaad ee Android 10 oo wata One U 2.0 oo loogu talagalay Galaxy S9 iyo S9 + ayaa hadda loo heli karaa in la soo dejiyo.
Samsung Galaxy XCover Pro wuxuu maraa FCC
Samsung Galaxy XCover Pro wuxuu marayaa FCC kahor imaatinkiisa dhow ee suuqa oo ah mid kamid ah telefonada aadka u adkaysta.
Cusboonaysiinta amniga cusub ee Galaxy S7
Samsung ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo amniga ah oo loogu talagalay Galaxy S7, Galaxy A80 iyo kiniinka Galaxy Tab A 10.5 (2018)
Samsung Galaxy S11e ma imaaneyn kamarad 108 MP ah
Nooca miisaaniyadeed ee Samsung Galaxy S11e kuma jiri doono dareemayaasha awoodda badan ee shirkaddu ku dari doonto laba ka mid ah moodooyinka ugu awoodda badan khadka.
Huawei P40 Pro wuxuu ku faani doonaa 10x zoom optical iyo kuwa iibiya, sida lagu sheegay warbixin cusub
Sida laga soo xigtay waxa uu falanqeeyaha caalamiga ah ee Tianfeng Guo Mingyu ku sheegay warbixintiisa cusub, Huawei P40 Pro wuxuu yeelan doonaa 10x zoom optical ah.
Google Pixel 3 waxaa la rabay inuu la yimaado shaashadda 120 Hz LCD
Sida laga soo xigtay xubin ka mid ah kooxda qaabdhismeedka 'Android Framework', midka yar ee Pixel 3 looma maleyneynin inuu leeyahay shaashadda OLED, laakiin waa 120Hz LCD.
Huawei waxaa la saadaalinayaa inuu noqdo nooca leh saameynta ugu badan suuqa casriga 5G ee 2020
Cilmi-baarista Counterpoint waxay liis garaysaa Huawei oo ah shirkadda ugu caansan suuqa casriga ee 5G ee sii kordhaya.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OnePlus 7 iyo 7 Pro waxay dib u soo celineysaa shaqadii "Hide notch"
OnePlus 7 iyo 7 Pro waxay helayaan cusbooneysiin cusub oo soo kordhineysa horumarinno kala duwan isla markaana markale ku daraya wax ay shirkaddu joojisay inay siiso.
Sawirradii ugu horreeyay ee Galaxy Fold 2 waa la sifeeyey
Sawiradii ugu horreeyay ee aan rasmi ahayn ee Galaxy Fold 2 ayaa lagu daadiyay shabakadda bulshada ee Weibo ee Shiinaha.
Sawiro taleefan gacmeedka Samsung ah oo soo shaac baxay
Midkii noqon lahaa Galaxy Fold 2, in kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo ku saabsan nooc ka mid ah laabka qolofta shirkadda South Korea ee Samsung si ay ugu sharaddo taleefannada gacanta.
Oppo Reno 3 Pro wuxuu ku qoran yahay websaydhka rasmiga ah
Oppo's Reno 3 Pro ayaa ka soo muuqday websaydhka rasmiga ah ee shirkadda wax soo saarta wuxuuna muujiyaa faahfaahinta ugu horreysa ee taleefan casri ah oo heer sare ah.
LG G7 One wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10
LG G7 One wuxuu helayaa waqti dheer kadib cusbooneysiinta ugu muhiimsan ee Android, nooca 10. Terminalkan wuxuu yimid suuqa 2018.
Huawei P Smart Pro wuxuu ku soo baxayaa shaashad yar-yar si uu u doorto kamarad pop-up ah
Huawei P Smart Pro waa taleefan casri ah oo cusub oo ay soo saartay shirkadda Shiinaha oo la socota kamarad sawir qaade ah iyo qalabka loo yaqaan 'Kirin 710F chipset'.
Nokia 2.3 ayaa ugu danbeyntii laga hirgaliyay dalka Hindiya isagoo noqon doona taleefan casri ah oo qiimo jaban
HMD Global ayaa Nokia-ta cusub ee 2.3 galisay suuqa Hindiya iyada oo ay u tahay qiimo aad u wanaagsan taleefanka casriga ah.
Redmi 9 wuxuu imaan doonaa 2020 isagoo wata Helio G70 oo ka socda Mediatek
Sida laga soo xigtay xog cusub, Redmi 9 ayaa la bilaabi doonaa horaantii 2020 iyada oo la adeegsan doono Mediatek cusub ee Helio G70.
Samsung Galaxy S10 iyo Note 10 waxay ku duulayaan Android 10 rakibay
Jaantusyadan la wadaago waxay muujinayaan farqiga muuqda ee isticmaalka CPU ee Android 10 marka la barbar dhigo Android 9 ee Galaxy S10.
Sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Galaxy Note 10 Lite
Dhowr bilood ka dib markii la dusay, sawirradii ugu horreeyay ee xayaysiinta ee Samsung Galaxy Note 10 Lite ayaa ugu dambeyn la soo saaray